Intliziyo yeWest End edumileyo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguCraig
Akunakubakho ndawo ingcono eGlasgow's edumileyo West End.
Ukutya isidlo sakusasa kwaye ujonge ngqo kwiiGadi zeBotanic ukusuka kwifestile enkulu yebhayi yeyona ndlela igqibeleleyo yokuqalisa naluphi na uhambo lwasekhaya.
Le flethi ikwisitalato esithe cwaka esinemithi esinendawo yokungena epaki enqumla ngqo.
Ndiyazingca ngenkonzo kunye nonxibelelwano kwaye ndiya kuba khona kulo lonke ixesha lokuhlala kwakho.
Jonga iiVW Campervans zam zokukhenketha eSkotlani.
*izithintelo ezintsha zokupaka Aug 22. Iivawutsha ziyafumaneka
Iflethi ikufuphi neByres Road & Great Western Road, iipaki, umbindi wedolophu, izithuthi zikawonke-wonke kunye nesikhululo seenqwelomoya. Yeyona nto ithandwayo kubazali abandwendwela iYunivesithi. IMyuziyam yaseKelvingrove kunye neGalari yobuGcisa ikwakuhambo olufutshane.
Uya kuyithanda indawo ngenxa yokukhanya kunye nophahla oluphezulu.
Ikhaya lam lilungele izibini ezitshatileyo, abahambi bebodwa, abahambi ngeshishini kunye neentsapho ezincinci.
Andiwamkeli amatheko okanye iziyunguma zasebusuku; ayilulo uhlobo lwendlu njengoko ndinabamelwane abasele bekhulile.
4.94 ·Izimvo eziyi-195
4.94 · Izimvo eziyi-195
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi195
Iflethi yimizuzu emibini yokuhamba ukusuka kwiQueen Margaret Drive, iByers Road kunye neGreat Western Road ineebhari ezininzi, iindawo zokutyela, iikhefi kunye neevenkile ezizimeleyo. I-West End ibonelela ngeendlela ezininzi zokuzonwabisa emnyango wakho. Imivalo yomculo ephilayo, ithiyetha, imidlalo, iivenkile ezizimeleyo kunye neendawo zokutyela zasekhaya. Kufuphi neDyunivesithi yaseGlasgow kunye neentlobo ngeentlobo zeepaki zoluntu ezintle. Perfect ukuba usedolophini emtshatweni, ikonsathi okanye isidanga.
Umntu uya kuhlala ekhona ukuze ancede. Iinkcukacha zoqhagamshelwano ziya kunikwa xa kungena.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$268